Juballand oo digniin siisay Musharaxiinta doorashada Madaxweynaha Maamulkaas – Wakaaladda Wararka Hiilnews
Juballand oo digniin siisay Musharaxiinta doorashada Madaxweynaha Maamulkaas
By Ciise Cabdi Ciise on October 31, 2018 No Comment
Arboco, October, 31, 2018(HNN) Wasiirka Amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur Janan ayaa digniin ka soo saaray doorashada madaxweynaha cusub ee maamulkaas isagoo la hadlayey saraakiisha ciidamada ee ka kooban Daraawiishta, Nabad-sugidda iyo Booliiska.
Wasiirka ayaa si faahfaahsan uga hadley inaysan ciidamadu qabiil iyo siyaasad midna shaqo ku laheyn ilaalinta amaanka dalka iyo dadkana ay shaqadoodu tahay waajibna ka saran yahay.
Sidoo kale wasiirka ayaa sheegey in aysan Jubbaland ka dhici karin sida hadda ka dhacdey magaalada Baydhabo oo ay dhawaan doorasho ka dhici doonto taasoo ay Dowladda federaalka ahi gaysey musharaxiin wata gaadiid iyo ciidan u gaar ah.
Wasiirka ayaa sheegey in qof kasta oo isu soo sharaxaya xilka madaxtinimada Jubbaland uu xor u yahay inuu yimaado magaalada Kismaayo isagoo aan ciidan iyo wax khalkhal galinaya amniga la socona u ka soo dego garoonka lana soo dhaweynayo.
Wasiirka ayaa sheegey haddii la isku dayo tan Baydhabo ka dhacdey oo kale in garoonka laga celin doono musharaxiinta noocaas u dhaqma amniga iyo xasiloonida Jubbaland-na aan looga indha qarsan karin shakhsi u soo diyaar garoobey khalkhal galinta amniga gobolka.
Juballand oo digniin siisay Musharaxiinta doorashada Madaxweynaha Maamulkaas added by Ciise Cabdi Ciise on October 31, 2018